Ogaden News Agency (ONA) – Wasiirka Arrimaha Dibadda Norway oo Muqdisho Tagay.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Norway oo Muqdisho Tagay.
Wasiirka arrimaha dibadda wadanka Norwday Borge Brebde iyo wafti ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray Magaaladda Muqdisho, waxaana soo dhoweeyay masuuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ka midyahay Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar.
xubnaha Wafdiga oo loo gudbiyay xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaa la filayaa inay la kulmaan Ra’isul Wasaaraha Soomaali Xasan Cali khayre, Madaxweynaha Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madax kale ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhowaan ayay ahayd markii R/wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu dalka Qadar kula kulmay wasiirka Arrimaha dibadda ee Waddankaasi Norway, iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal.
Hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay in dowladda Norway ay aqoonsatay Baasaboorka Diblomaasiga ah ee Soomaaliyeed ,waana dowladii u horraysay ee reer yurub ee go’aankaasi ku dhawaaqda.